Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Caribbean » Kariibiyaanka ayaa ku biira ololaha Airbnb Live iyo Work Anywhere
Maaddaama dabacsanaantu ay noqoto qayb joogto ah oo ka mid ah dhaqamo badan oo shirkadeed, Airbnb waxay doonaysaa inay u fududayso shaqaalaha inay ka faa'iidaystaan ​​dabacsanaantooda cusub. Iyada oo in ka badan 6 milyan oo liisaska adduunka oo dhan ah, madalku waxa uu bilaabay khamiistii la soo dhaafay barnaamijkeeda "Live and Work Anywhere", hindise socda oo lagu sii wado la shaqaynta dawladaha iyo DMOs si loo abuuro dukaan hal meel ah oo loogu talagalay shaqaalaha fogfog, laguna dhiirigeliyo inay tijaabiyaan wax cusub goobaha shaqada, iyadoo gacan ka geysaneysa soo nooleynta dalxiiska iyo bixinta taageero dhaqaale bulshooyinka ka dib sanado badan oo xayiraad safarka ah.
Gobolka Kariibiyaanka, Airbnb waxay ogaatay in:
Saamiga habeennada la ballansan yahay joogida muddada dheer ee Q1 2022 waxay ku dhowdahay labanlaab marka la barbar dhigo isla muddadaas 2019.
Q1 2019, ku dhawaad ​​6% ee dhammaan ballan-qaadyada waxay ahaayeen joogitaan waqti dheer ah, halka Q1 2022 boqolkiiba tani ay gaartay ku dhawaad ​​10%.
Tirada habeennada la ballansan yahay joogida muddada dheer waxay saddex jibaarmeen Q1'22 marka la barbar dhigo Q1'19.
Iyadoo tan la yiraahdo, Airbnb iyo Ururka Dalxiiska Kariibiyaanka (CTO) ayaa iska kaashaday si kor loogu qaado Kariibiyaanka si ay u noqoto meel macquul ah oo lagu noolaado oo laga shaqeeyo meel kasta, iyada oo loo marayo bilaabista ololahooda "Shaqada Kariibiyaanka". Ololahan waxa loogu talagalay in lagu iftiimiyo oo lagu dhiirrigeliyo meelaha kala duwan ee loo aado iyada oo loo marayo bogga degitaanka kaas oo bixiya macluumaadka fiisaha miyiga dhijitaalka ah ee waddan kasta, iyo sidoo kale iftiiminta fursadaha ugu fiican ee Airbnb ee lagu joogi karo oo laga shaqeeyo. Boggaan soo degista xayeysiinta wuxuu noqon doonaa mid u gaar ah kuwa kale ee adduunka oo dhan wuxuuna muujin doonaa meelaha soo socda ee 16 ee ka qaybqaata sida ikhtiyaarrada loogu talagalay Miyiga Dijital ah: Anguilla, Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Jasiiradaha Virgin Islands, Jasiiradaha Cayman, Dominica, Guyana, Martinique, Montserrat, St. Eustatius, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Trinidad.
"Soo kabashada joogtada ah ee dalxiiska Kariibiyaanka waxaa horseeday hal-abuurnimo iyo rabitaanka in laga faa'iidaysto fursadaha, sida kor u kaca reer-guuraaga dhijitaalka ah iyo horumarinta barnaamijyada joogitaanka muddada dheer si loo kala saaro khibradaha booqdayaasha ee gobolka. CTO waxay ku faraxsan tahay in Airbnb ay aqoonsatay Kariibiyaanka mid ka mid ah si ay u muujiso barnaamijkeeda Live iyo Work Anywhere ee caalamiga ah, iyo samaynta sidaas, taageer guusha sii socota ee gobolka. "- Faye Gill, Agaasimaha CTO, Adeegyada Xubinnimada.
"Airbnb waxay ku faantaa inay mar kale la shuraakoobaan CTO si ay u sii wadaan kor u qaadida meelaha kala duwan ee Kariibiyaanka si dadku u shaqeeyaan oo ugu safraan gudaha. Ololahani waa dadaal cusub oo wadajir ah oo sii wadi doona caawinta horumarinta gobolka cajiibka ah. " - Maareeyaha Siyaasadda Airbnb ee Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka Carlos Muñoz.
Iskaashigu waa mid ka mid ah hindisayaasha badan ee barnaamijka socda ee CTO si ay xubnaheeda uga caawiyaan dib u dhiska dalxiiska iyo iftiiminta barnaamijyada reer guuraaga dhijitaalka ah ee meelaha ay u socdaan.
Airbnb Caribbean Ururka Dalxiiska ee Caribbean-ka Central America Dalxiiska
Komishanka Yurub ayaa kor u qaadaya maalgelinta tallaalka ee Afrika